हेटौँडामा मिर्गाैला रोगीको डायलाइसिस सेवा सञ्चालन – Medianp
हेटौँडामा मिर्गाैला रोगीको डायलाइसिस सेवा सञ्चालन
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, पुष २४, २०७४१३:२६
हेटौँडा, २४ पुस । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थाना भर्‍याङस्थित चुरेहिल अस्पतालमा दुवै मिर्गाैला काम नगर्ने बिरामीका लागि आज बिहानदेखि डायलाइसिस सेवा शुरु गरिएको छ । आरोग्य फाउण्डेसन प्रतिष्ठान ललितपुर र रोटरी क्लब मकवानपुरको सहकार्यमा चुरेहिल अस्पताल हेटौँडामा तीन वटा डायलाइसिस मेसिन स्थापना गरी सो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
पाँच जना मिर्गौला बिरामीलाई आज डायलाइसिस सुविधा उपलब्ध गराईएको चुरेहिल अस्पतालका प्रशासन प्रमुख रविरमण अधिकारीले जनाकारी दिनुभएको छ । डायलाइसिस सेवा हेटौँडामा पहिलेपटक सञ्चालनमा ल्याइएको हो । काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र चितवनमा गरी कुल १५५ जना मिर्गौला रोगीका बिरामीले नियमित डायलाइसिस सेवा लिँदै आएको जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय मकवनपुरका प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलले बताएका छन् ।
चितवन, काठमाडौँ र भक्तपुरका गरी २५ जना मिर्गाैला रोगीका बिरामीले डायलाइसिस सेवाका लागि चुरेहिल अस्पतालमा नाम दार्ता गराएको चुरेहिल अस्पतालका प्रशासन प्रमुख अधिकारीले बताए । चुरेहिल अस्पतालले मिर्गौला रोगी बिरामीको चापलाई केन्द्रित गरी आगामी तीन महिनाभित्र सात वटा नयाँ डायलाइसिस मेसिन जडान गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । रासस
निःशुल्क पञ्चकर्म आयुर्वेद चिकित्सा सेवा सञ्चालनमा
‘रेस ३’ पनि सलमान खानको धमकेदार एक्शन देख्न पाइने !
पिल्सको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? त्यसोभए होसियार , यसले महिलाहरुलाई मृत्युको नजिक पुर्याउछ
पुरुषको लागि पनि आयो गर्भनिरोधक सुई, एक पटक लगाएपछि एक वर्षलाई ढुक्क
के तपाईमा मोटोपना र दमको समस्या छ ?त्यसोभए यी दुई घरेलु उपाय अपनाउनुस् , ठीक हुन्छ (विधिसहित)
यस्ता छन् बच्चा जन्मदै मुटुमा प्वालपर्ने कारणहरु
के तपाई विहानै उठेर बासी मुखमा पानी पिउनुहुन्छ ? यस्ता छन् फाइदाहरु ,हेर्नुस (भिडियोसहित्)